Qarjab: Puntland baa hadda Weerar ku ah Alshabaab iyo Daacish (dhegayso) – Radio Daljir
Qarjab: Puntland baa hadda Weerar ku ah Alshabaab iyo Daacish (dhegayso)
Juunyo 29, 2017 1:53 b 0
Maxaa ka jira in ciidamada PL ay weerareen farriisimo Shabaabku ku leeyihiin Buuraleyda Galgala weerarkii Af Urur kaddib?
Waxaan ka waraystay Wasiirka Amniga Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
Wasiir Qarjab wareysi uu caawa siiyey Radio Daljir waxa uu kaga hadlay waxa ka jira warar dhawaan soo baxayey ahna in ciidanka xoogga ee PL ay weerar culus ku qaadeen goobo ay Al-Shabaab ku sugan yihiin oo ku yaalla buuraleyda Galgala ee gobolka Bari, weerarkii shabaabku ku qaadeen Af Urur kabacdi.
Md. Qarjab ayaa dhanka kalana ka hadlay sida ay hadda tahay xaaladda ammaanka ee deegaanada PL, qorshaha dawladda ee la xiriira sugidda amniga, doorka dadweynaha ee arrintaas iyo arrimo kale oo amniga quseeya.
Wasiirka ayaa isagoo ku sugan Garowe khadka telefoonka ugu warramay Axmed Sh. Maxamed “Tallman”
Garoowe: Fursad Shaqo NRC – Sarkaal ICT (National Position)